Igumbi elijwayelekile labantu abangu-2
Toledo, Castilla-La Mancha, i-Spain
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Hotel Cigarral De Caravantes
Sinamagumbi angu-17 abanzi, wonke anethala kanye nemibono yedolobha laseToledo futhi wonke aqhele ngekhilomitha elilodwa ukusuka endaweni endala yedolobha, afinyeleleka ngezinyawo futhi anendawo yokupaka yamahhala nemahhala.
Emakamelweni ethu sigqamisa ukunethezeka nokunambitheka okuhle. Sinakekela imininingwane emincane, okwenza ukuhlala kwakho kube ukuvakasha ongasoze wakukhohlwa. Ezinye zazo zinombhede ophindwe kabili ongu-150 cm kanti ezinye ziyimibhede emibili engu-105 cm ndawonye.
Ihhotela i-Cigarral de Caravantes e-Toledo lakhiwe endaweni endala yomphakathi ophakeme waseToledo. Phakathi nekhulu le-18, ihhotela lethu kwakungelomculi odumile owaziwa ngokuthi "Señor de Caravantes", owaba umpetha wendlu yesonto eCathedral yaseToledo. Izingadi zayo ezinkulu zihambisana nesitolo sokudla, idamu lokubhukuda elingaphandle, i-terrace café-bar, indawo yokupaka yamahhala, amathala kanye ne-gazebo.
IHotel Cigarral de Caravantes itholakala ezintabeni ezizungeze iToledo, imizuzu eyi-10 nje ukusuka endaweni yamaJuda, eDolobheni Elidala. Ijabulela ukubukwa okukhethekile kwedolobha, elimenyezelwe njengeNdawo Yamagugu Omhlaba yi-UNESCO, kanye nomfula iTagus owuphawu. Imibono yayo emangalisayo ikhuthaze abadwebi abaningi abadumile
Ibungazwe ngu-Hotel Cigarral De Caravantes
Hlola ezinye izinketho ezise- Toledo namaphethelo